I-China Arhente yoyilo lwentambo yomatshini kunye nabathengisi | Imitya ye-Gepair
Uyilo lwentambo yomnatha
I-mesh ye-Stainless iron Design iyabonakala kwaye iyinto enobuchule, i-mesh inokusetyenziswa kuzo zonke iintlobo zesicelo kubandakanywa ii-balustrade kwiibhlorho kunye nezitepsi, ukufakwa kwe-zoo eguqukayo, isiza se-aviary, uthango olukhulu lomqobo, kunye neenkqubo ze-façade trellis njl.
Intambo yesakhelo yentsimbi engenasici isetyenziswa kakhulu njengesixhobo esilihombisiyilo esinempahla yokhuseleko njengenxalenye yokudityaniswa komgangatho womsebenzi njengenye yezinto zokwakha, Ngokungakumbi, ngenxa yokubonakala kwazo okuphezulu, intambo yentsimbi engenasici kunye nemiyalezo efaneleke kumbonakalo jikelele ulwakhiwo ngokulula, nokuba lu-ethe nkqo okanye lubethe nkqo, luyakwazi ukulungelelanisa ngokungafaniyo nobume bendawo enqwenelekayo ukukhuselwa.
I-mesh yentsimbi engenasiciko inikezela ngamathuba ahlukeneyo osetyenziso loyilo kunye nolwakhiwo lwangaphakathi, ubukhulu beedayimitha ezahlukeneyo kunye nobungakanani obuguqulweyo be-mesh buvumela izisombululo ezenziwe ngocoselelo.
Izinto zentambo yoyilo engenazintsimbi
1. Ubunzima, amandla aphezulu, ukuhlala ixesha elide, ukuthamba okuhle kunye nokukhathala, ukuxhathisa kwempembelelo, amandla amakhulu okuqhekeza, isakheko somelele kwaye sine-dura ble, ubomi benkonzo ngaphezulu kweminyaka engama-50.
2. Ukubonakala ngokucacileyo, ukubukeka okuntofontofo, isitayela senoveli, sinokuhlanganiswa kunye nokusingqongileyo, kufutshane nendalo, ukukhuselwa kwendalo eluhlaza, zinezinto ezintle kakhulu zokuhombisa kunye nokukhusela.
3. Phantse awudingi naluphi na ulondolozo, kwaye unokusetyenziswa kwakhona.
4. I-mesh yentsimbi engenasici, ivumela ulwakhiwo olunemilinganiselo emibini kunye neendlela ezintathu, ezahlukeneyo zeedayimitha zentsimbi, ubungakanani bomngxunya kunye nobungakanani bepaneli bunokwenziwa ngokwezifiso ukufezekisa iimfuno zakho.
Edlulileyo: I-mesh yentsimbi engagugiyo (uhlobo lwerhasi)
Okulandelayo: I-mesh yensimbi eluhlaza yensimbi
Uyilo lweNtambo Mesh